1. 'Bitcoin'၊ ကမ္ဘာသစ်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး အမြတ်အများဆုံးရရှိမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးပင်! ဆယ်စုနှစ်များစွာအကြာပါ မည်သည့်အစိုးရအေဂျင်စီနှင့်မသက်ဆိုင်သောငွေကြေးရှိလိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်အားပြောပါသည်။ ဒါပေမယ့်အားလုံးကျော်အသုံးပြုမှုအတွက်ရေပန်းစားပါလိမ့်မယ် ဘယ်ဘဏ်ငွေပေးချေမှုထက်လျော့နည်းငွေပေးချေမှုအခကြေးငွေရှိပါတယ် သငျသညျရယ်မယုံကြလိမ့်မယ်။ သို့သော်ယနေ့သင်သည်မည်သည့်အရာကိုမဆို ၀ ယ်နိုင်သည်ကိုသက်သေပြခဲ့သည် Bitcoin ဟုခေါ်သောငွေပုံစံဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအမြတ်အစွန်းများရရှိသည်။ Bitcoin ဆိုသည်မှာ Bitcoin သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကွန်ပျူတာများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ intangible ပိုက်ဆံဘယ် ငွေစက္ကူဒါမှမဟုတ်ဒင်္ဂါးတစ်ပြားနဲ့တူအောင်ငါတို့အတွက်ပုံသဏ္noာန်မရှိဘူး။ ၎င်းသည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောစနစ်ဖြစ်သည်။ ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်မှမရှိပါ။ သို့သော်အုပ်စုတူအဆင့်တူအချင်းချင်းငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့်အွန်လိုင်း ၀ ယ်ရန်ငွေအစားငွေကိုသုံးနိုင်သည်။ ထိုငွေကိုခေါ် "Cryptocurrency"
2. ငွေရှိဖို့အတွက်ပိုက်ဆံအိတ်တစ်လုံးရှိရမယ် သင်ငွေရှိလိုပါကဘဏ်အကောင့်နှင့်တူသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုရှိသည့်ကောင်းသောပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုကိုသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့မဖြည့်မီကျနော်တို့ bitcoins သိုလှောင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် - Coinbase ပိုက်ဆံအိတ်သည်စမတ်ဖုန်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် iOS ရော Androind နှစ်ခုစလုံးကိုဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် Bitcoin လဲလှယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကတကယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ထွက်လာပြီးပိုက်ဆံအတွက်အာမခံကိုပေးပါတယ်။ Mycelium သည်စမတ်ဖုန်းများတွင်လူကြိုက်အများဆုံးပိုက်ဆံအိတ် application ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Trezor၊ Tor နှင့် Bitcoin သိုလှောင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများကဲ့သို့သောနည်းပညာအသစ်များကိုလည်းထောက်ပံ့နိုင်သည် - Electrum ဤပိုက်ဆံအိတ်သည်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အသုံးပြုသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့လုံခြုံရေးစာဝှက်စနစ်စနစ်ပါရှိတယ်။ bitcoins တွေအများကြီးကောင်းကောင်းထားရန်
3. Bitcoin ရဖို့ဘယ်လို
4. အစပြုသူများအတွက်အခမဲ့ကြေးနန်း ယုံကြည်စိတ်ချရသော giveaway ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှအခမဲ့ Bitcoin ကိုရနိုင်သည့်ကံကြမ္မာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါ။ ဘယ်ဂရုတစိုက် check လုပ်ထားရမည်ဖြစ်သည် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ထဲကအများစုဟာတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လှည့်ဖြားကြလိမ့်မယ် အမှန်တကယ်ဖြန့်ဝေထားသောဝဘ်သည်ဤသို့ဖြစ်သည် https://freebitco.in Zipmex.co.th, Bitkub.com, Satang.pro သို့မဟုတ် Huobi.co.th ရှိမည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှမဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ bitcoin လိပ်စာကို ၀ င်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပြီးအနည်းဆုံးပမာဏအထိရောက်ရှိသည်။ ဘယ်တော့လဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်
5. လိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်း၊ ဘတ်ကတ်မှ Bitcoin ကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ ယ်မည်၊ ထိုင်း၊ ၄ င်းတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သော Zipmex.co.th၊ ငါတို့ပိုင်ဖို့ကုန်သည်တစ် ဦး ထံမှ Bitcoin အကောင့်နှင့်ဝယ်ပါ။ သင်နှစ်ပေါင်းများစွာငွေချေးလိုသောဆန္ဒပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ သို့မဟုတ် Bitcoin ကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်ဘတ်ငွေရောင်းဝယ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ crypto market ဟာအမြဲတမ်းဖွင့်လို့ပဲ။
6. ထူးခြား။ ပျော်ရွှင်စရာ Bitcoin သည်၎င်းကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံဖြင့်ရွှေကဲ့သို့တူးဖော်နိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကစုစုပေါင်း ၂၁ သန်းရှိဖို့ဒီဇိုင်းလုပ်ထားလို့ပဲ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သတ္တုတွင်းနည်းစနစ်များအသုံးပြုရန်ရှိသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူတက်တူးရန်ဖြစ်ပါသည် ဘယ်ဒီမြေတူးစက်ကိုအွန်လိုင်းမှာ ၀ ယ်လို့ရမလဲ ၎င်းကို set up လုပ်ပါ။ ငါတို့အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒင်္ဂါးတွေတူးထုတ်တယ်။
7. Bitcoin တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနည်းလမ်းတိုင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ မည်သည့်အရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ သို့သော်ငွေကြေးအတွဲ၏အသေးစိတ်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုအစဉ်လေ့လာရန်အရေးကြီးသည်။ အမြတ်အစွန်းကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာကျဉ်းမြောင်းစေရန်ကူညီရန် သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုရယူပါ